कस्तो प्रेमी चाहन्छिन् सोनाक्षी ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
कस्तो प्रेमी चाहन्छिन् सोनाक्षी ?
२ आश्विन २०७३ १ मिनेट पाठ
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा फिल्ममा क्षणभरमै प्रेममा पर्छिन् । पहिलो दृष्टिमै प्रेममा परेको दृश्य उनी अभिनीत प्रायः सबै फिल्ममा छ । तर, वास्तविक जीवनमा भने उनले अझैसम्म प्रेम गर्न लायक मनको राजकुमार फेला पार्न सकेकी छैनन् ।
‘मनले खाएको व्यक्ति अहिलेसम्म भेटेकी छैन, जो मेरो मनको राजकुमार बनोस्,’ उनले भनिन् । कस्तो व्यक्ति तपाईंको मनको राजकुमार बन्न योग्य छ भनी गरिएको प्रश्नको जवाफमा सोनाक्षीले भनिन्, ‘ऊ फिल्मी खालको कदापि नहोस् । तर, उसमा ‘सेन्स अफ ह्युमर’ चाहिँ हुनैपर्छ । ऊ मलाई हँसाउने खालको हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ १२:०८ आइतबार
कस्तो प्रेमी चाहन्छिन् सोनाक्षी